Iikhompyuthela eziPhambili zeNyukliya
I-TV kunye neFilimu Iimfazwe zamaVili
by UJohnny Rico
Iifilimu ezilandelayo zizinye zeengqungquthela eziphazamisayo (eziphazamisayo) eziza kubonwa. Ziye zikhukhumele ngaphezu kwanoma yimuphi umkhosi we-gory okanye i-movie ye-horror, kuba ibonisa ihlabathi elinakho konke. Nangona isongelo sokutshabalalisa i-nyukliya sinokuthi sincedise ukuwa kweSoviet Union, ukuba ubukela iifrimu kuloluhlu, uya kuzikhumbula ngokukhawuleza ukwesaba okukrakra kweMfazwe yeHlabathi. Ngolunye lwale mafilimu awona mafilimu emfazwe enqabileyo, kodwa-lumkiso - ezinye zazo zingashiya ungalali. Ekwahlelwe ngokulandelelana ukususela kumncinci ophazamisayo kunokwesaba okukhulu, zilapha iifilimu eziyisixhenxe ze-apocalypse yenukliya ...
UDkt Strangelove (1964)
UStanley Kubrick wayejonge ingcamango yonke imfazwe phakathi kweSoviet Union kunye neUnited States, wacinga ukuba utshintshiselwano lwenkyukliya ekugqibeleni, kunye nokutshatyalaliswa kwehlabathi eliza kulandela kwaye wacinga kuye, "Oku kukuhle kakhulu!" Okanye, ubuncinane, enye igqityiwe kufuneka ibe nayo kuba wenza uDkt Strangelove: Okwenzeka njani, Ndafunda ukuyeka ukukhathazeka nokuthanda ibhobho , yenye yeyona nto ibhetele yemfazwe yexesha lonke. (Kwaye uhleka ngokumnandi!) Ifilimu ibuza umbuzo othi: Yintoni eya kwenzeka xa umphathi omkhulu wase-US eqalise ukuhlaselwa kwe-nyukliya kwi-Soviet Union, ngaba iiyure zokugqibela zaziyobonakala njani kwiGumbi leMfazwe phantsi kwePentagon apho uMongameli kunye nezinye Amadoda abalulekileyo azama ukulawula le meko? Impendulo i-insanity ekhohlakeleyo.
Umnqweno wam ozithandayo, uPeter Sellers obiza uMongameli waseRussia ukuba achaze ngokuhlaselwa kwezinto zenukliya ngokukhawuleza, "UDimitri, kulungile, kubonakala ngathi siyehamba kwaye senza into engekho nto ..."
Cofa apha kwiiMididi zeMfazwe eziPhambili kunye eziPhambili .
I-Miracle Mile (1988)
Ifilimu ye "gimmick" enomnandi kakhulu. ELos Angeles, indoda ifumana umnxeba kwifowuni yokuhlawula apho umntu uye wahlawula ngokucacileyo ukuba "bayakwenza" ukuba baqhube inkinobho yokutshintshisana nenyukliya. Ejongene nantoni na eyayiza kusengaphambili ulwazi lwenkathazo, kufuneka anqume ukuba yintoni enokuyenza nale nkcazelo. Ngokukhawuleza, ukukhokela kwakhe kwiinkcukacha kuphuphuma njengoko ilizwi livuza kwaye yonke idolophu iyahlaselwa yintlanzi njengoko ifuna ukuphuma ngaphandle komzi phambi kokuhlaselwa. Ifilimu ezonwabisayo, ixhomekeke ngokuqinile kwi-1980's vibe. Hayi kwaye "kumnandi" ukuba ngo "kumnandi" uthetha ukuqhuma kwe-nuclear nyukliya kwinqanaba laseLos Angeles.
Eli phephancwadi, ekhangela umdlalo oselula uKevin Costner, ulandela enye intsapho yaseSan Francisco njengoko ilwabalalisa ukusinda emva kokuhlaselwa kwe nyukliya. Okwenzelwe i-movie ye-TV, kunamathuba okuphazamisa, kodwa kusekho kakhulu kumgangatho "we-TV". Ngokomntu, ndicinga ukuba i-postrait yemfazwe yangemva kwemfa ibonisa kakhulu kwaye iqinisekile kwaye imeko yehlabathi ngokwenene iya kuba yingozi kakhulu kunokuba iboniswe kwifilimu.
Cofa apha kwiiMiboniso zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu ngeMfazwe yamaHlathi.
Usuku Emva (1983)
Ngaloo nyaka unyaka wokukhululwa kwePestamente, Usuku Emva kokuvulwa kwithelevishini eUnited States, kwaye kulo mhla, kusekho ifilimu yeTV yexesha lonke, kunye nabantu abayizigidi ezilikhulu abajongene nokubukela ifilimu malunga ne-Kansas ezimbini iintsapho ezizama ukusinda ekuhlaselweni kenyukliya. Eyesabisa ngaphezu kokuhlaselwa ngokwawo, yinto eyenzeka emva koko, xa iqela elityhukisiwe libuyela kurhulumente, ukuba zonke iinjongo neenjongo, azikho. Ukugula kweemitha, ukutya kunye nokuphelelwa kombane, indlala, ukuphanga, ukudlwengula nokuphangisa konke ukulandela. Le ngongoma enkulu yeTestamente .
Eli phephancwadi, ngokusekelwe kwinqanaba lokufumana iRommac McCarthy inoveli, ilandele indoda kunye nendodana yakhe ejikeleza i-post-apocalyptic. Kodwa oku akunjalo "okuqhelekileyo" emva kokuxhamla, akusiyo uMad Max apho kukho izixeko ezisebenzayo apho unokubhinqa impahla; Kunoko, i-apocalypse enokuyingozi kakhulu, inqatshelwe, kwaye iyantyantya.
Akukho zizwe ezisebenzayo, zikhona kuphela abantu abajikelezayo kwizigaba ezahlukeneyo zendlala. Awuhlangabezani nabanye abahambahamba endleleni, ufihla kwaye ulinde ukuba zidlule. Okugqithiseleyo kukuba kukuba yona iplanethi ngokwayo ibonakala ibonakaliswe ngokusisigxina ebusika benyukliya, isibhakabhaka siphakade, kwaye ininzi yemveliso yezityalo kunye nemithi iyafa. Akunakwenzeka ukukhula kwezityalo kwaye akukho kubonakala ngathi zininzi izilwanyana eziseleyo, oku kuthetha ukuba abantu balwa nokufa ngenxa yamanani ambalwa asele anokutya. I-Cannibalism, eqinisweni, isenziwa rhoqo.
Kukho kweli hlabathi elixakekayo ukuba indoda kunye nendodana yakhe ihamba ngokuthe ngqo ukuya kunxweme. Kutheni umda? Awazi. Injongo, into ozama ukuyisebenzisa. Uthando lwabo ngomnye nomnye, yinto kuphela ebenza baqhubeke. Ibali elibuhlungu kodwa elinamandla.
(Cofa apha ukuba ufunde malunga ne-10 Imibono Enokumangalisayo ye-Apocalypse.)
Xa umoya uvutha (1986)
Le filimu yaseBrithani ilandela isibini esithatha umhlalaphantsi esasikhuphe umhlalaphantsi ngaphambi nangemva kokuhlaselwa kwe-nyukliya kwi-United Kingdom. Esi sibini sizama ukusinda ngokubhekiselele kumaphephancwadi e-real-life adluliswa nguRhulumente wase-UK ngendlela yokusinda ukuhlaselwa - akufanele kube yinto emangalisayo kubaphulaphuli ukuba abahambeli kakuhle, njengoko behlulwa ngokukhawuleza ekutshatyalaliswa kobutyhefu. Eyona nto ibonisa ifilimu epheleleyo-ubude obubukela abantu abathandekayo abancinci befa, ngelixa bekulwela imiyalelo ye-asinine efana nokwenza iinqaba kwiqhekeza kunye neembotyi ukuze bahlale behlaselwa yi-thermo-nyukliya. Yintoni eyenza le filimu yonke into ephazamisayo kukuba i-cartoon! Ngokuqinisekileyo, ikhathuni ephazamisayo eyake ndiyibona!
Cofa apha kwiiMpawu eziPhambili kunye eziPhambili kunazo zonke zeKapa .
Le yifayile ephazamisayo kunabo bonke uluhlu. (Empeleni, le yinto enye yeefilimu eziphazamisayo zenziwa naluphi na uluhlu!) Yenzelwe i-movie ye-TV e-UK, yaveliswa yi-BBC kwaye ekukhululweni kwayo, abantu abazange babone into enjengeyo. Ndaphinda ndibukele le filimu kutshanje kwaye ndatshitshiswa ekuthuleni kwaye ndalala ngokukhawuleza ngaloobo busuku, kwaye ndinokunyamezela ngokukrakra kwi-cinematic suffering and disfort.
Ifilimu ilandela iintsapho ezimbalwa ezihlala ubomi eSheffield, eUnited Kingdom (i-Sheffield ibe ngumzi ophakathi komda ophakathi kwimizi emininzi yemikhosi) xa kuqubuka imfazwe yenyukliya ngokukhawuleza. Icandelo lesithathu lesalathisi libandakanya igosa likarhulumente wengingqi ozama ukugcina urhulumente, kodwa, ngokuqinisekileyo, unokukhawulwa ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwezithuba. Ifilimu ijongene nokutshintshiselwa kweekliya zenu kwiindlela ezibonakalayo ezicacileyo, ngokuqinisekileyo ukuba unokucinga-oko kukuthi imifanekiso iyingozi. Ewe, kukho ukufa kwabantu abaninzi, kodwa ngabantu abasemigqumeni yesiteyunyukliya esikhathazeka kakhulu.
Kukho ukufa, intshabalalo nokuhlupheka. Kwaye ke, kufuneka kuthiwe, ukuba bonke abalinganiswa kwifilimu bayafa.
Okuthakazelisayo kukuba utshintsho lwenuzikliya luyingxenye yefilimu, eqhubekayo kwiminyaka emininzi emva koko, ibe yimbali yokuqala kwimbali yokujongana nengcamango ye "nyukliya ebusika," apho iplanethi eyonakalisiweyo yenza ukuba ukulima kungenakwenzeka, ugcino lwe-ozone oludlulileyo luthumela ukukhula kweengxaki zomhlaza, kwaye abantu beeplanethi behla ukuya kumgangatho ofanayo owakhona ngexesha leMnyama.
Enye yeemafilimu ezidityanisayo zenziwa; Ngokudabukisayo, mhlawumbi enye yezona nkcukacha ezichanekileyo malunga nokuba yonke into enokukhatshwa kweekliya yenyuke njani.
Cofa apha kwiiMidlalo eziPhambili zeMfazwe eziPhezulu zoNyaka zonke .
Iimifanekiso ezili-10 eziphambili ze-Movie About Crimes Crimes
Iimpapasho eziphezulu ze-'Qinisekisa 'zamaVili
Iimfazwe zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu malunga ne-Aerial Combat
IiFilimu zeMfazwe eziphazamisayo kunazo zonke
Iimfazwe eziMnandi kunye eziMbi kakhulu kwi-PTSD
I-Greatgest Financial Action Film Flops - Ilungiswe kwiMali-mali
IiFilimu zeMfazwe eziPhambili kunye eziPhambili
Iimboniselo ezigqwesileyo nezona zibi kakhulu zeTaker ze-All Time
Amafilimu e-Israel aphezulu kunye nePalestina yempi
Iifilimu zaseHollywood ezixhaswe ... I-Pentagon
Imephu yoBukumkani baseRoma
Ukuveliswa kweSilikhi kunye noRhwebi kwiMinyaka ephakathi
I-Shot Put Rotational Technique
Iingxoxo zeeNgxoxo zeeKlebe kwiKholeji
Umlingo noMagick: Ibali emva kwamazwi
Iziqu zezilwanyana: Yibani njengeTotems
Imeko yangoku eMpuma Mpuma
Ukuguquguquka kwesimo (ulwimi)
UColón Waba njani uColumbus?
Izicwangciso zoLondolozo lweeNdawo zoLondolozo lweZikolo zeBusiness Business
Amaqela aHlangeneyo kwiMfundo
I-Rubidium Facts - Rb okanye i-Element 37
Yintoni i-Environment-Rich Rich?
Kutheni iNoko isetyenzisiwe (Abanye) I-Watercolor Paint?
I-Biography ka-Agasti Wilson: I-Playwright ibe 'Iingcingo'
Indlela Yokwenza Umtya Wonyaka WaseTshayina Wokuhlanganisana
Iikholeji ezi-25 eziphezulu zeNew England zaseYunivesithi
Indlela yoSlate kwi-Audition
Konke malunga ne-Inca Sun uThixo